Taariikhda madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo - BBC News Somali
Ra'iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo doortay madaxweyne ka dib markii Xasan Sheekh uu qirtay guul darro markii uu dhammaaday wareegii labaad ee codbixinta. Haddba waa kuma Farmaajo?
Maxamed Cabdullaahi Farmajo waxa uu ku dhashay Caasimada Muqdisho sanadkii 1962-dii. Waxa uu dugsiga dhexe uga baxay iskuulka 1-da Luuliyo, kan sarena wuxuu ku qaatay dugsigii farsamada gacanta ee Lafoole.
Faramaajo waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo dheer deganaa magaalada New York ee dalkan Maraykanka.
Wuxuu inta badan noloshiisa ku soo qaatay qurbaha, gaar ahaan dalka Maraykanka. Farmaajo waa aabe dhalay afar caruur ah.
Wuxuu shahaadada koobaad ee B.A-ga iyo shahaadada labaad ee M.A-ga ka qaatay Jaamacadda New York ee ku taalla Buffalo sanadihii 1997-kii iyo 2000.
Shaqooyin kala duwan ayuu soo qabtay oo ay ka mid tahay dhanka xuquuqda aadamaha. Agaasime guud ayuu ka soo noqday hay'ad u doodda xuquuqda bulshada sanadkii 2002-dii.
Wuxuu ka soo shaqeeyay safaaradda Soomaaliya ee dalka Maraykanka sanadihii 1986-dii ilaa 1989-kii.
Bishii Octobar 14-keedii sanadki 2010-kii Maxamed Cabdulah Farmaajo waxaa loo magacaabay raiisal wasaaraha Soomaaliya, Isaga oo badelay Cumar Cabdirashiid Sharmarke oo xiligaasi iska casilay bilka hor intii aysan isku dhicin madaxweynihii xiligaasi Shariif Sheekh Ahmed.
Bishii Octobar, 31-deedii 2010-kii, xubnaha barlamaanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixyay raiisal wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Khilaaf soo kala dhexgalay Farmaajo iyo Sheekh Shariif ayaa horseeday in uu xilka iska casilo
Kontonkii maalmood ee ugu horeysay xafiiska ra'iisulwasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku guuleystay bixinta mushaaraadka ciidamda iyo shaqaalaha dowlada.
Dhanka dagaalka, Xukuumadii cusbeyd ee Farmaajo iyo ciidamada AMISOM waxa ay hanteen boqokiiba lixdan caasimada Muqdisho, iyagoo oo ka saaray dagaalyahanadii Al-Shabaab.
Hase ahaate dhowr bilood ka dib khilaaf u dhaxeeyay raiisalwasaare Farmaajo iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo afhayeenkii baarlamaankii Shariif Xasan Sheekh oo salka ku hayay qabashada doorashada 2011-ka August.
19-kii bishii Juun 2011, ra'iisulwasaare Farmaajo waxa uu iska casilay xilka, Ka dib heshiis lagu soo gaaray Kampala.